Mmiri mmiri kacha njọ na Spain | Netwọk Mgbasa Ozi
El okpomọkụ ọ na-abụkarị oge ọtụtụ ndị na-atụ anya ya. Enwere ụbọchị 90 nke anyanwụ na-akpọ gị ka ị nọrọ ụbọchị n'ụsọ osimiri iji nọrọ ụbọchị ahụ, ma ọ bụ pụọ maka ịgagharị. Ọ bụkwa oge ezumike, ịga ezumike ma ọ bụ iwepụtụ ntakịrị n'ọrụ ụbọchị gị. Ma ọ dị nwute na mgbe ụfọdụ ọnọdụ okpomọkụ dị oke elu iji nwee ike ịnụ ụtọ oge kachasị ọkụ n'afọ.
Lee, anyị ga-agwa gị ihe ebili mmiri kacha njọ na Spain enwere kemgbe.
1 Kedu ihe bụ ebili mmiri?
2 Mmiri ikuku kacha njọ na Spain
Kedu ihe bụ ebili mmiri?
Mgbe anyị na-ekwu maka ebili mmiri ọkụ, anyị na-ezo aka na oge nke opekata mpe ụbọchị 3 nke edekọtara okpomọkụ, ma nke kachasị na nke pere mpe, dị oke njọ n'ụzọ dịkarịa ala 10% nke ọdụ ụgbọ elu. Anọ ọkwa dị iche iche dị iche iche:
Verde: mgbe enweghi nsogbu nye ahuike.
Amarillo: Ọ bụrụ na okpomọkụ dị elu karịa ka ọ dị, ebili mmiri nwere ike ịdị ize ndụ karịsịa maka ụmụ ọhụrụ, ụmụaka, ndị gaferela afọ 65 na ndị nwere ọrịa na-adịghị ala ala (ọrịa shuga ma ọ bụ ọbara mgbali elu).
Oroma: mgbe nnukwu okpomọkụ na-aga n'ihu ruo ọtụtụ ụbọchị, na-emetụta ndị dị ize ndụ.
Rojo: mgbe ọ nwere ike imetụta mmadụ niile, ọbụlagodi nke ahụike. Ha bụ ikpe pụrụ iche.
Otu n'elu ndepụta bụ nke sitere na 2015. Ọ bụ ya kachasị ogologo edekọ ruo 1975, yana oge nke Ụbọchị 26, site na June 27 ruo July 22. Warmbọchị kachasị ekpo ọkụ bụ July 6, na 37,6ºC, ma emetụta mpaghara 30 na July 15.
Oge okpomọkụ ahụ bụ otu n'ime oge kacha njọ Spain na Europe n'ozuzu tara ahụhụ. Na mba mbụ, ebili ọkụ ahụ malitere na July 30 ruo August 14, ma emetụta mpaghara 38 na August 3, 4 na 9. Ọnọdụ okpomọkụ nke mba ahụ bụ 24,94ºC.
Afọ ahụ hụrụ ihe nke atọ kachasị mkpa okpomọkụ. Ọ dịgidere n’abalị asatọ nke asatọ ruo n’abalị iri na otu ma metụta mpaghara iri anọ. Hotbọchị kachasị ewu ewu bụ August 8, nke nwere okpomọkụ nke 39,5ºC.
Okpomoku okpomoku bu ihe omuma nke meteoro ihu igwe nke puru imetuta otutu puku mmadu. Cheta ka i buru mmiri oge niile iji zere akpịrị ịkpọ nkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » Mmiri ikuku kacha njọ na Spain